downloads 10 536
Onodi ntu North American T-6G Texan. A nnọọ mma ochie nlereanya. Dị Na otu livery. The ụda nke zuru okè.
The North American T-6 Texan bụ isi ọzụzụ fighter maka ụgbọelu n'oge Agha Ụwa nke Abụọ nke Allied mba. Ọ na-mara dị ka SNJ na US Navy, na AT-6 Harvard USAAC na ikuku agha na Commonwealth. Ọ ndibọhọ a nnukwu azụmahịa ihe ịga nke ọma: mịrị bụ 15,495 mbipụta, niile nsụgharị gụnyere.
Onye edemede: Cliff Presley, Charlotte, Denis da Silva